အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း - နာဆာအကြောင်းကို Nedelcho Laskov
2014 အတွက် NASA ရဲ့ Ames အာကာသအခြေချပြိုင်ပွဲတွင်အနိုင်ရသောအသင်း၏အဖွဲ့ဝင်။ လောလောဆယ်လီဗာပူးလ်တက္ကသိုလ်မှလေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာလေ့လာနေ။
အကြှနျုပျ၏အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုခြောနာဆာရဲ့အာကာသအခြေချပြိုင်ပွဲ၌ငါ့ပါဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့အသင်း၏နောက်ဆုံးစီမံကိန်းသည်ယှဉ်ပြိုင်မှုအပေါငျးတို့သအဆင့်ထဲကကျွန်တော်တို့ကိုတဟုန်ထိုးမြင့်တက်သွားသည်သောက Grand Prize ကို, အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ငါအနိုင်ရခဲ့ကြပါပြီရှိသမျှသည်အခြားသောပြိုင်ပွဲနှင့်ပြိုင်ပွဲကြောင်းအဓိကနာဆာ event မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းအားဆက်သရန်အခံစားမှုအားဖြင့်ဒီစာအုပ်ကိုအထင်သေးကြသည်။
ငါဒါမပြောလိမ့်မယ်။ ဤမြေကွက်၌ငါ၏အအကျိုးစီးပွားငါသည်ဤအစီအစဉ်ကိုရှေးခယျြခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ နီးပါးကျွန်မပညာရေးကိုဆက်လက်လိုချင်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆုံးဖြတ်ခဲ့သောအလွန်နောက်ဆုံးအခိုက်အထိပါပဲ။ ကြှနျတေျာ့နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်အဓိကအချက်ကတော့ကျူရှင်စရိတ်နှင့်အသုံးစရိတ်သည်ပညာသင်နှစ်၏ကြာချိန်, ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး preference ကိုဖြစ်ကြသည်။
ကျောင်းဆင်းပွဲအပေါ်သို့ငါအာကာသယာဉ်၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းချင်ပါတယ်။ ငါကအသံဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့နုံနားလည်သဘောပေါက်ပေမယ့်နှင့်အညီ, တနေ့ငါနာဆာဘို့ငါတို့စီမံကိန်းအမည်ရအာကာသ junk ခဲ့အတိအကျဘာအလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်။ ထိုအခါဤပြဿနာသည် ပို. ပင်ဖိဖြစ်လာကြပါပြီမည်ကလျင်မြန်အရေးယူရန်လိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
သငျသညျ 20 နှစ်ပေါင်း '' အချိန်၌အကြှနျုပျတို့၏ဂြိုဟ်ပေါ်တွင်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောကမ္ဘာကြီးကိုစိတ်ကူးပါသလား အဘယ်အရာကိုသင်အညီတူကြလိမ့်မည်နည်း
ငါမကြာသေးမီနှစ်များတွင်ဖြစ်ရပ်များသာတိုးတက်မှုနှေးကွေးခဲ့ကြနှင့် saddening ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့အရာကဒီလူသားမျိုးနွယ်နှင့်ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာရှိသမျှသက်ရှိနှစ်ဦးစလုံး၏ရှင်သန်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ လောလောဆယ်, ဖွံ့ဖြိုးရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဂြိုဟ်ကိုဖျက်ဆီးတော်ရာမှာနှုန်းများအတွက်လျော်ကြေးပေးဖို့လုံလောက်တဲ့အစာရှောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
လူအတော်များများဟာကိုယ့်အခြားသူများနှင့်မျှဝေဘယ်တော့မှသူတို့၏အတွေးအခေါ်များအပေါ်အရှုံးမပေးနဲ့ဘယ်တော့မှသူတို့ကိုဖြည့်ဆည်း။ သင်သည်ထိုသူတို့၏တဦးတည်းမဟုတ်ပါ။ သင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုလိုက်နာရန်သင့်အားမောင်းနှင်သောအတွင်းစိတ်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ?
ငါလူတိုင်းကိုသူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်များကိုတန်ဖိုးထားသင့်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ ထို့အပွငျကတဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစ၌အချို့သော Self-ယုံကြည်မှုယုံကြည်ခြင်းကြာပါသည်။ ငါအဆက်မပြတ်တစ်ခုခုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ငါသညျငါ့စိတ်ကူးများအပေါငျးတို့သနားလည်သဘောပေါက်လို့မရဘူးနားလည်ပေမယ့်အနည်းဆုံးသူတို့ကိုငါအချို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့နည်းလမ်းတွေရှာကြံနေပါတယ်, နေ့တိုင်းအသစ်သောအတွေးအခေါ်များနှင့်အတူတက်လာသူတစ်ဦးဖြစ်၏။ သင်တစ်ဦးတည်းအလုပ်မလုပ်ကြပါဘူးအခါသင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အခါကအများကြီးပိုလွယ်သည်။ စိတ်ကူးတစ်ခုမျှဝေခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ သင်သည်သင်၏စိတ်ကူးကိုမျှဝေလျှင်နှစ်ဦးသာဖြစ်နိုင်သမျှရလဒ်များတဦးတည်းဟူသောအယူအဆကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖြစ်တဲ့ Fatal ပြဿနာရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အရှင်စိတ်ကူးအမှိုက်ပုံးခံရတက်အဆုံးသတ်ရှိပါတယ်; အခြားရွေးချယ်စရာသင်ကပင်ပိုကောင်းစေမယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေအတူလုပ်ကိုင်နေကြသည်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကူးများဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့်ငါတို့သည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်။ နေပါစေသူတို့ထင်ရစေခြင်းငှါဘယ်လိုရို့ကားသင့်ရဲ့စိတ်ကူးများဝေမျှပါနဲ့! ထို့ကြောင့်သင်သာအနိုင်ရနိုင်သည်!
သငျသညျ Nedelcho Laskov အကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သမျှကိုဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်:
နာဆာ, လူ, ကြောငျးသား | | rating:5/ 30